Anshaxa tifaftirka | Wararka Safarka | Wararka Safarka
Adag iyo hufnaan.
Siyaasadeena tifaftirka waxay ku saleysan tahay 7 qodob oo hubinaya in dhamaan waxyaabaha aan ka kooban nahay ay noqdaan kuwo adag, daacad ah, aamin ah oo hufan.
Waxaan rabnaa inay kuu sahlanaato inaad ogaato yaa qora waxa ka jira deegaankeena iyo aqoonteenna waa inaad sameysaa.
Waxaan rabnaa inaad ogaato iloheena, cidda aan ka helno iyo macnaha iyo aaladaha aan adeegsanno.
Waxaan ka shaqeyneynaa inaan waxan oo dhan ka dhigno mid suurtagal ah anagoo siinayna akhristayaasha suurtagalnimada inay noo soo sheegaan wixii qalad ah ee ay arkaan iyo wixii horumar ah ee ay doonayaan inay soo jeediyaan.
Internet-ka oo ay ku jirto xanuun ku sumoobaya faafitaanka, waxaa si gaar ah muhiim u ah in la kala sooco warbaahinta la isku halleyn karo iyo kuwa aan lagu kalsoonaan karin.
Waxaan ku saleyneynaa anshaxayada tifaftirka 7 qodob, oo aan hoos ku hormarin doono:
Dhamaan macluumaadka aan daabacno waa la hubiyaa si loo hubiyo inay run tahay. Si loo gaaro ujeeddadan, waxaan isku dayeynaa inaan isku diiwaangelino ilaha aasaasiga ah, kuwaas oo ah diiradda wararka, sidaas darteedna looga fogaado isfaham la'aanta ama fasiraadda aan saxda ahayn ee macluumaadka.
Annagu dan kama lihin dano siyaasadeed ama ganacsi oo waxaan ka qoreynaa dhex-dhexaadnimo, annagoo isku dayeyna inaan noqonno sida ugu macquulsan marka aan gudbineyno wararka oo aan bixinayno qibradeena ku saabsan dib u eegista wax soo saarka iyo isbarbardhiga.
Tifaftirayaasha takhasuska leh
Tifatire kastaa wuu sifiican u yaqaan maadada shaqaysa. Waxaan la macaamilnaa khubarada goob kasta. Dadka muujiya maalin kasta inay lahaadaan aqoon weyn maadada ay wax ka qorayaan. Si aad u baran kartid, waxaan uga tagnay macluumaad iyaga ku saabsan iyo xiriiriyeyaal astaamahooda bulsheed iyo taariikh nololeedkooda.
Maaddada asalka ah
Dhamaan waxyaabaha aan daabacno waa asal. Nuqul kama qaadaneyno ama kama turjumeyno warbaahinta kale. Waxaan ku xirnaa ilaha u dhigma haddii aan isticmaalnay, waxaanan soo xiganeynaa milkiilayaasha sawirrada, warbaahinta iyo ilaha aan u isticmaalno inaan ku siino macluumaadka ugu saxsan ee suurtagalka ah, annaga oo u tixgelinayna hay'adda ku habboon.
Uma adeegsanno cinwaanno been abuur ah ama cinwaano xamaasad leh si aan u soo jiidanno akhristaha annaga oo aan haysan wax war ah oo ku saabsan. Waxaan nahay kuwo adag oo run sheeg ah, sidaa darteed cinwaanada maqaalkeennu waxay u dhigmaan waxaad ka heli doontid waxyaabaha ku jira. Annagu ma abuurin rajo laga qabo waxyaabaha aan ku jirin jirka wararka.
Tayo iyo heer sare oo ka kooban
Waxaan abuurnaa maqaallo tayo leh iyo nuxur iyo waxaan had iyo goor doonaynaa heer sare. Isku dayga inaad daryeesho faahfaahin kasta oo akhristaha ugu dhawaato macluumaadka ay raadinayaan una baahan yihiin.
Markasta oo aan khalad ka helno ama nala soo socodsiiso, dib ayaan u eegeynaa oo waan u saxnay. Waxaan haynaa nidaam xakameyn qalad gudaha ah oo naga caawiya inaan si joogto ah u dhammaystirno qodobbadayada, iyo sidoo kale inaan ka hortagno inay mar kale dhacaan mustaqbalka.
Waxaan si joogto ah u hagaajineynaa waxyaabaha ku jira barahayada. Dhinac, sixitaanka khaladaadka iyo, dhinaca kale, ballaarinta casharrada iyo waxyaabaha aan waqtiga lahayn. Thanks to dhaqankan, dhammaan waxyaabaha ku jira shabakadaha ayaa loo beddelaa nuxur tixraac ah oo faa'iido u leh dhammaan akhristayaasha, mar kasta oo la akhriyo.
Haddii aad hayso wax cabasho ah ama soo-jeedin ah oo ku saabsan maqaal ama qoraa, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad isticmaasho kuwayaga foomka xiriirka.